“Limonade” amboarina, manadio aty sady mampihena haingana
Ankoatra ny fanaovana régime dia manamora ny fampihenan-tena koa ny fisotroana zava-pisotro manadio ny taova sy manafaingana ny fiasan’ny metabolisma. Anisan’izany ity atolotra anao ity :
· voasarimakirana 1 + didiny 1
· tantely 1 sf
· poivre de Cayenne (tsena lehibe) 1 tsongo
· sakamalaho vovony 1 tsongo
· rano mafana 1 kaopy
· jirofo voakiky 1 tsongo
Zaraina roa ny voasarimakirana dia alaina ao anaty kaopy ny ranony. Tapohina tantely ilay ranom-boasarimakirana dia alefa ao koa ny sakamalaho sy ny poivre de Cayenne ary ny jirofo. Aroina tsara dia tapohina rano mafana. Asiana didina voasarimakirana alona ao. Andrasana hihena ny maripanan’ilay zava-pisotro vao sotroina.
Manadio ny aty ireo akora mandrafitra ity zava-pisotro ity. Rehefa voadio ny aty dia mora amin’ny vatana ny manapotika ireo loto izay anisan’ny mahatonga ny tavy hiandrona. Manamora ny fandevonan-kanina koa izy ity. Mpanala arafesina matanjaka be koa ny sakamalaho sy ny jirofo ka ireo mitambatra no mahatonga ity zava-pisotro ity afaka manadio ny aty sady mampihena.
Sotroina vao maraina raha mbola tsy misy na inona na inona ny vavony. Atao mandritra ny herinandro. Lanjalanjaina ny sakafo hohanina mandritra izany.